Esi mee ka mgbidi na-echekwa ebe ahụ na mkpọda - Ógbè dịpụrụ adịpụ nke nwere mmasị - 2019
Mgbidi na-ekpuchi na mpaghara na oghere aka aka ha
O nwere ike ịbụ ọnọdụ dị mma maka ịme mkpebi - ihe ị ga - enweta maka nhazi nke nsogbu ahụ: ụlọ ezumike dị ala ma ọ bụ nke na - adabaghị adaba. Nhọrọ nke mbu bu ihe mara nke oma ma di mfe. Nhọrọ nke abụọ dị ọnụ ala karịa na-egbu, n'ihi na ebe ndị nwere nsogbu siri ike anaghị adị oké ọnụ ahịa n'etiti ndị bi n'oge okpomọkụ, ndị na-atụ egwu ihe isi ike ndị nwere ike ime. Ka anyi gbalịa ichota isiokwu a ma gh ota ihe omuma ya na ihe ndi ozo. Ma eleghị anya, ụlọ dị na mkpọda ahụ adịghị njọ dịka o yiri ka ilere anya na mbụ.
Kedu ihe na-emechi mgbidi?
Ihe na otu esi eme mgbidi na-echekwa na dacha
Otu esi eme mgbidi nke osisi
Mkpuchi mgbidi a na-echekwa ọla
Nkume nkume na-ejigide
Block na-ejigide mgbidi
Esi mee ka mgbidi na-eche nche nke gabions
Ịmepụta mgbidi brik
Esi arụnye mgbidi na-emechi ihe
Atụmatụ nke ngwaọrụ na-ejigide mgbidi: otu esi eme ya ka ọ bụrụ na usoro ahụ adịghị ejikọta mmiri
Uru na ọghọm nke saịtị ahụ na mkpọda
Ọ bụrụ na ọ dị mma iji nyochaa nlekọta na ndokwa nke saịtị ahụ n'okpuru mkpọda, ị nwere ike ịchọpụta ma ihe ndị dị mma ma na-adịghị mma.
Ihe ọghọm dị ukwuu bụ:
họrọ ebe nke ụlọ obodo ahụ, ụlọ ndị ọzọ na akwụkwọ ntanetịka ogige kwesịrị ịdabere na mkpọda, ọ bụghị naanị na arịrịọ onye nwe;
asa ala mgbe mmiri ozuzo na snow snow;
mmegide na-emegide mmeze na ala mmiri dị mkpa;
Mgbalị siri ike nke ndị mmadụ gafee ebe ahụ, karịsịa n'oge akpụrụ mmiri na mmiri ozuzo - nke ka elu nke mkpọda ahụ, ọ ga-esikwu ike ịdaba;
usoro ogbugba mmiri na-agbagwoju anya, enwere ike inwe ihe isi ike n'inye mmiri;
mmiri na-asọ asọ nwere ike ịdọrọ akụkụ nke elu nke saịtị ahụ, ala nwere ike igosi ntu oyi;
kwadoro maka nzere na - enweghị oke - oke ma ọ bụ ezughị ezu;
ihe dị mkpa dị mkpa iji meziwanye ebe nrụọrụ ahụ.
Uru ndị gụnyere:
Ọnụ ego nke ngalaba na-agabiga agafe dị nnọọ ala karịa nke ọnụ ala ahụ;
n'oge a na-ewu ụlọ ụlọ, ala a na-agafe agafe na ọkwa ahụ;
echiche mara mma site na windo;
akụkụ elu nke saịtị ahụ enweghị nsogbu nke idei mmiri na mmiri mmiri, okpuru ulo na ala ga-akọrọ;
ohere iji ghọta ihe niile ị chọrọ ime na ọchịchọ gị, iji gosipụta mmadụ n'otu n'otu ma mepụta ọ bụghị nanị ụlọ ezumike, kama ọ bụ ezigbo okwu nke mpako.
Ọ dị mkpa! Site na ịgha mkpụrụ na mgbọrọgwụ osisi, ị nwere ike ime ka ala dị ike.
Site n'enyemaka nke mgbidi na-eme ka mgbidi dị ike ma ọ bụ ogige ebe a na-aga. Mgbidi na-emechi ahụ dị ezigbo arụ, ọ na-eme ka mkpọda ahụ dị ike, na-egbochi mbibi na ịchụpụ saịtị ahụ, ma nwekwara ike ịghọ ihe dị mkpa banyere nsogbu ahụ, nhazi na ichota ókèala ya.
Maka ịrụ ọrụ nke ọrụ ndị a, ihe ndị dị mkpa dị mkpa - ntọala maka ntọala, mgbidi n'onwe ya, otu akụkụ nke na-ejide okpukpu ala, enwere ike ịchọ mma ihu nke abụọ, yana drainage na drainage - n'ihi na mmiri na-agbakọta n'etiti ala na mgbidi na-ejide ya. Mgbidi dị ala na-adọrọ mmasị dị mma na nhazi nke saịtị ahụ na akwa ifuru, akwa ifuru, niches na oche mgbidi.
Mgbidi a na-ejigide bụ ụdị mgbidi nke na-echebe ala a na-ejighị n'aka. A na-eji aka aka gị wuo mgbidi na-akwado ya. A na-eji ígwè, nkume, brik, osisi na ihe ndị ọzọ na-adịgide adịgide maka owuwu ya. Ka anyi mata ihe omuma nke ulo na-echekwa mgbidi nke ihe di iche iche.
Maka mgbidi e ji osisi kpuchie ọ bụla edere na dayameta 200 mm. Ọnọdụ bụ isi maka nchedo oge dị ogologo nke mgbidi dị otú ahụ - eme ihe site na ire osisi, na-echebara oge mkpuchi ahụ. Mgbidi e ji emechi nke ederede, nke e wuru n'elu ibé na mkpọda, bụ ụzọ kachasị mma maka ime ka ala dị ike, nke na-adabere ma obere ma nnukwu slopes.
Enwere ike idowe na ntanetịsite n'ịgba ha nso. Usoro nhazi a adịghị achọ nhazi ntọala nke ntọala. Ịkwesịrị igwu na ndekọ dị omimi ma ọ dịkarịa ala ọkara mita, n'ihi na nkwụsi ike nke usoro a dabeere na omimi nke egwu ala. E nwekwara ike ịtọ ntọala ederede. A na-efopụ olulu, a na-awụsị ebe a na-agbanye ala, a na-etinye akwụkwọ mbụ ahụ, a na-ejigide okporo ígwè na ala, mgbe ahụ, a na-ejikọta ihe ndekọ ndị fọdụrụ na mbọ ma ọ bụ ihe nkedo.
A ga-ejikwa ájá na ájá ma ọ bụ brik ndị a gbajiri oghere site na mgbidi ruo n'ala. Nhọrọ dị mma ga-abụ imebi akwa ifuru na mgbidi dị otú ahụ. Nke a ga-eme ka mmiri drainage, na nchịkọta ga-aghọ ebe mara mma nke osisi a kụrụ.
Ị ma? Idobe ọkụ na mgbidi a na-emechi, ị nwere ike inye mmadụ ihu ọma ma mee ka i nwee mmetụta ịhụnanya.
Ọbụna onye na-ewu ewu na-ewu ewu ga-enwe ike iji aka aka ya mechie mgbidi nkume. Nhọrọ a mara mma n'onwe ya, sitekwa na greening ohere n'etiti nkume, ị ga-enweta ezigbo mma nke gị na saịtị. Tupu ịtọ nkume ahụ ịkwesịrị ịkwado ntọala nke mgbidi n'ọdịnihu. A na-egwu olulu mmiri dị mita nkeji, a na-etinye bọmbụ n'akụkụ nke ọ bụla, ihe arụpụta ihe jupụtara na ihe - 1 akụkụ, 6 akụkụ ájá na akụkụ isii nke ájá. Ngwakọta ga-esi ike maka ọ dịkarịa ala ụbọchị anọ.
A na-emeso ihe na-ekpo ọkụ na lime ngwa agha. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọrụ kachasị njọ na ịtọ nkume ndị a sachaworo na mmiri tupu oge amalite. Nkume ọ bụla kwesịrị ịchọta ọnọdụ kachasị mma n'igbu. A na-eji akwa nkedo akwa akwa kpuchie ọkpụkpụ nkume ahụ.
Mgbidi na-emechi nke nkume nkume, nke aka gị ji aka gị rụọ, ga-enwe obi ụtọ na ị ga-enwe ọhụụ siri ike. Ngwurugwu ndi a choputara na ndi nwere nchedo na-ele anya na ndi mmadu na-adighi nma na ndi mmadu n'ime ihe ndi ozo.
Enwere ike iwusi mgbidi nkume na-eme ka akuku ala, n'enweghi mgbochi ciment. N'okwu a, ohere dị n'etiti nkume nwere ike jupụta n'ala maka nhazi ala. Iji mechie mgbidi ahụ, a na-egwu olulu mmiri dị ka ọkara mita nke miri emi, jupụta na ọkara ya na akpụkpọ anụ, nke a na-etinye na nkume a na-asachasị na otu, na-enwe mmetụta dị nta na mkpọda ahụ.
Iji wụnye mgbidi nke nkume nkwụsị, ị ga-achọ nnukwu ọnụ mmiri na nkume, a na-awụsị gravel na ebubo, nke a na-ejikọta ya na nkwado. A na-ekpuchi nkume ndapụta na-emecha ihe.
Ọ dị mkpa! Sntinye aka kwesiri okpukpu ato obosara nke odi n'ihu, na oke nkpa - nke ato nke mgbidi.
Gabions ga-ekwe ka ị ghara iji oge dị ukwuu maka nhọpụta na ịtọtu nkume kwesịrị ekwesị n'etiti onwe ha maka ịtọ ntọala. Iji wuo ha, ịchọrọ netwọk - akpa na nnukwu mkpụrụ ndụ karịa nkume ndị jupụtara na ya. Igwe a jupụtara na nkume ndị e kere eke ma tinye ya n'ọdụ ụgbọ elu.
Gabions jikọtara ya na waya siri ike. Elu nke Gabion dị mita 1 chọrọ ntọala maka nrụnye. Iji belata ụgwọ nke mgbidi ahụ, a na-eji nkume mara mma chọọ mma ihu, akụkụ nke ahụ zoro ezo nwere ike jupụta na mkpọmkpọ ebe. Mgbidi na-echekwa gabions na mba ahụ dị na ya ma ọ bụ iji wusi mgbada ahụ na ala.
Maka owuwu nke mgbidi brik, a na-etinye ntọala ahụ na ịtọ ntọala nkume. Maka mgbidi na-akwado ya, ịchọrọ brik nwere àgwà ọma na mmiri na-eguzogide mmiri. A na-eji mgbidi dị elu ruo mita 0.6 wuo ya; ọ bụrụ na ọ dị elu, mgbe ahụ brik gafere.
Na nke abụọ nke brik ọ dị mkpa ka ị dọọ mmiri drainage mmiri ọ bụla brik ise nke masonry. A na-eji blọm sụnye blọlụ ọ bụla nke ọ bụla, a na-etinyekwa brik nke ọzọ. A na-atụ aro ka ị kwadebe nhazi nke brik na mmiri ozuzo. A na-ekpuchi ọdịiche dị n'agbata mgbidi ahụ na ajịrịja ma ọ bụ pebbles. Ụlọ mgbidi brick ga-eji otu ụlọ brik rụọ otu ụlọ.
Ị ma? Nkume okike nke kwekọrọ na mpaghara ọ bụla nke saịtị: granite, sandstone, basalt, cobblestone na quartzite.
Mgbidi na-ekpuchi ihe na-adịgide adịgide. Osimiri na-egwu ala, nke ala jupụtara na gravel ma ọ bụ ahịhịa, site na ígwè ígwè kwesịrị weld eku. A na-etinye ihe nkwado a na olulu gwuru, a na-etinye ụdị ihe a na mgbidi nke ọwa ahụ, a na-agbanye eriri drainage n'akụkụ akwụkwọ ahụ, a na-agbanyekwa ihe dị na n'elu. Ihe a ga - arụpụta nke ọrụ a ga - abụ ihe siri ike, nke dịgidere, nke nwere nrụgide, na - eme ka nkwenye ígwè sie ike. O kwere omume ichikota mgbidi nke nwere ihe mara mma, nkume awara, iji tinye ya na osisi na-akpa ákwà.
Ogige dị n'ime nke mgbidi ahụ na-ejigide ọ bụghị nanị na-ejide ala nke saịtị ahụ, kama ọ bụkwa ihe na-egbochi mmiri nke mmiri ala, nke a na-amanye imubanye na mgbidi ahụ. Ịchọta mmiri ga-ebibi mgbidi. Iji gbochie mbibi nke mgbidi ahụ, ị ​​nwere ike iji oyi akwa n'etiti n'azụ azụ nke mgbidi na ala nke apịtị, brik bido ma ọ bụ gravel. Ndaji a na-enyo mmiri nke na-abanye n'ime usoro mmiri drainage.
A na-ebu ụzọ nkedo mmiri ruo 100 mm tupu oge na-aga n'ihu na mgbidi ma ọ bụ tubules nwere mmasị 50 mm n'ime dayameta na ya site na nke ọ bụla na-agba ọsọ mita nke mgbidi. Ọ ga-ekwe omume itinye drainage ogologo oge site na ọkpọkọ a na-arụ ọrụ na dayameta nke 10-15 cm, ọbọp na geotextiles, n'ala na ntọala. Ihe a ga-abanye n'ime mmiri nke ga-abanye n'ime ọkpọ ma gbadaa karịa mgbidi ahụ.
Ọ dị mkpa! Nchịkọta nke ngalaba sloping amalite site na elu elu.
Ala - ihe ngwọta kasị mma mgbe ị na-eme atụmatụ mpaghara dị iche iche na saịtị ahụ na mkpọda. N'otu oge ahụ, saịtị ahụ ga-adị ka nzọụkwụ dị iche iche nke ọkwa dị iche iche na elu. Nke ọ bụla n'ime usoro ndị a ga-abụ otu okpokoro nke ọ bụla, nke mgbidi ya na-akwado ya. Ebe nrụọrụ ahụ nwere ọkwa dị elu ga-achọ nkwụsi ike site na mgbidi anọ nwere mgbidi dị iche iche.
Iji zere mmetụta nke ibi na nnukwu staircase, ọ ka mma idobe ogige ndị ahụ n'ọgba ma ọ bụ ọdụm, ikekwe ndokwa dị egwu. Nchịkọta nhọrọ nke saịtị a ga-enye ya anya dị egwu. Usoro elu na ala nke ala ahụ dị mma maka ịmepụta ebe ntụrụndụ. Ị nwere ike ịhazi ebe a na-ahụ anya ma ọ bụ ikiri nyocha ebe ahụ. Ngwá egwu egwu nke egwu ndị ahụ ga-eme ka atụmatụ ahụ dị mma ma mee njem na ubi ma ọ bụ ụlọ bụ ntụrụndụ dị ụtọ.
Beet, beetroot ma ọ bụ biiti: kedu ihe ọ bụ na gịnị bụ ihe dị iche? Ịghọta echiche
Ebee ka ebe kachasị mma ịkụ obere fir?
Osisi kwachaa na mmiri, ụbịa, okpomọkụ
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Mgbidi na-ekpuchi na mpaghara na oghere aka aka ha